WARBIXIN: Imisa Lacag Ah Ayay Barcelona Galisay Daafaceeda Tan Iyo Markii ay Kooxda Ka Tageen Carlos Puyol Iyo Dani Alves – Kooxda.com
Home 2017 July Spain, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino WARBIXIN: Imisa Lacag Ah Ayay Barcelona Galisay Daafaceeda Tan Iyo Markii ay Kooxda Ka Tageen Carlos Puyol Iyo Dani Alves
WARBIXIN: Imisa Lacag Ah Ayay Barcelona Galisay Daafaceeda Tan Iyo Markii ay Kooxda Ka Tageen Carlos Puyol Iyo Dani Alves
Wargayska marca ee ka soo baxa dalka Spain ayaa diirada saaray saxiixyadii ay samaysay kooxda Barcelona sanadihii ugu dambeeyay si ay daafaceeda ugu xoojiso kadib markii uu ciyaaraha ka fariistay Carlos Puyol sidoo kale kooxda ka tagay Dani Alves.
Sida uu sheegayso wargayska kooxda Barcelona ayaa suuqa galisay lacag dhan 133 milyan euro oo ay kula soo wareegeen 7 xiddig oo uu ugu dambeeyo Nelson Semedo oo ugu soo biiray 30 Milyan oo euro isaga oo kaga soo biiray kooxda Benfica.
Xiddigaha ugu fiican ee ay 4-ta daafaca ku xoojiyeen ayuu ka mid ahaa xiddiga reer France ee Samuel Umtiti oo kaga soo biiray kooxda Lyon sanadkii 2016 isaga oo ugu soo biiray lacag dhan 25 Milyan oo euro.
Waxa aanu warbixintan ku soo bandhigi doonaa saxiixyadii daafaca ee ay kooxda Barcelona samaysay sanadihii ugu dambeeyay iyo waliba lacagaha ay ka soo bixisay.
1.Daafaca Midig ee reer Portugal ee Nelson Semedo ayaa kooxda kaga soo biiray Benfica iyada oo ka soo bixisay lacag dhan 30 Milyan oo euro.
2.Daafaca bidix ee reer France ee Lucas Digne ayaa kooxda Kaga soo biiray PSG sanadkii 2016 waxana ay ka soo bixisay lacag dhan 16 Milyan oo euro.
3.Daafaca dhexe ee reer France ee Samuel Umtiti ayaa kooxda kaga soo biiray kooxda Lyon sanadkii 2016 waxana ay ka soo bixisay lacag dhan 25 Milyan.
4.Daafaca Midig ee reer Spain ee Aleix Vidal ayaa kooxda kaga soo biiray Kooxda Sevilla sanadkii 2015 waxana ay ka soo bixisay lacag dhan 19 Milyan.
5.Daafaca Midig ee reer Brazil ee Douglas Pereira ayaa kooxda kaga soo biiray kooxda São Paulo sanadkii 2014 waxana ay ka soo bixisay lacag dhan 4 Milyan.
6.Daafaca dhexe ee reer Belguim ee Thomas Vermaelen ayaa kooxda kaga soo biiray kooxda Arsenal sanadkii 2014 waxana ay ka soo bixisay lacag dhan 19 Milyan.
7.Daafaca dhexe ee reer France ee Jérémy Mathieu ayaa kooxda kaga soo biiray kooxda Valencia sanadkii 2014 waxana ay ka soo bixisay lacag dhan 20 Milyan.